Mareykanka oo sheegay inaysan taageeri doonin muddo kororsi | KEYDMEDIA ONLINE
Mareykanka oo sheegay inaysan taageeri doonin muddo kororsi
Dowladda Mareykanka ayaa ku dhawaaqday go'aankeeda ku aaddan in aysan taageeri doonin muddo kororsiga Golaha Shacabka BJFS uu usameeyay 12 April hay'adaha dowladda.
MUQDISHO, Soomaaliya - Dowladda Mareykanka ayaa ka hadashay go’aankii dhawaan ay Golaha Shacabka BJFS ay mudda kordhinta ugu sameeyeen hay'adaha dowladda iyo Madaxwayne Farmaajo oo muddo laba sano ah lagu abaal mariyay markii ay dalka gaarsiin waayeen afar sano oo ay hayeen doorasho qof iyo cod ah.
War qoraal ah oo ay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa lagu sheegay in ay ka xamaadeen qaraarkii dowladda fedaraalka ee lagu ansixiyay muddo 2 sano ah oo loogu kordhiyay muddo xileedka hay'adaha dowladda iyo Madaxwaynaha waqtigiisu dhammaaday ee Farmaajo kaasoo diiday in uu si nabada ku wareejiyo kursiga ugu sarreeya Soomaaliya.
“Waxaan horey ugu celcelinay in ay muhiim u tahay nabadda, xasiloonida, baraaraha iyo dowladnimada Soomaaliya in dowlada fedaraalka iyo dowladaha xubnaha ka ah ay gaaraan heshiis ku aaddan sidii horay loogu sii wadi lahaa geedi socodka doorashada,” ayaa lagu yiri qoraalka kasoo baxay wasaaradda arrimaha dibadda.
Dowladda Mareykanka iyo Beesha caalamka ayaa horay uga digay in muddo kororsi la sameeyo, ama doorashooyin hal dhinac ah iyo kuwa is bar-bar socda laga sameeyo gudaha dalka Soomaaliya, waxaana lagu sheegay in taasi ay keeneyso xasillooni darro siyaasadeed iyo xaalad amni oo xun oo dalka ka dhacda.
Mar kale ayey dowladda Mareykanka ku celisay hadalkaasi iyadoo usheegtay madaxda Soomaalida in lasii wado wadahadalladii looga arrinsanayay in looga heshiiyo doorashooyinka.
Dhanka kale, Midowga Yurub ayaa ku baaqay in si deg deg ah loogu laabto wada hadalada ku saabsan qabsoomida doorashooyinka iyadoo aan dib loo dhigin laguna saleynayo heshiiskii September 17 2020, lagu gaaray Caasimadda dalka.